Asa 8 - Ny Baiboly
Asa toko 8
Ny Eglizy enjehina - Filipo tao Samaria - Ilay Simona mpamoha angatra - Ny nanaovan'i Filipo batemy ilay manamboninahitr'i Kandasa mpanjakavavy.
1Tamin'izany andro izany, dia nisy fanenjehana mafy tamin'ny Eglizy tao Jerosalema, ka niely tany Jodea sy Samaria izy rehetra, afa-tsy ny Apostoly ihany. 2Nisy mpivavaka tsara sasany nandevina an'i Etiena, sady nitomany azy fatratra. 3Fa Saoly kosa nanenjika ny Eglizy; nidirany nosarihany tany an-trano na lahy na vavy, ka nataony an-tranomaizina.
4Ry zareo niely tamin'izay, dia nitety tany nitory ny tenin'Andriamanitra. 5Ary Filipo nidina tany an-tanànan'i Samaria, ka nitory ny Kristy tamin'ny olona tao. 6Nandre sy nahita ny fahagagana nataon'i Filipo ny vahoaka maro be, ka nihaino tsara izay nolazainy. 7Fa maro ny olona azon'ny fanahy maloto no nivoahany tamim-pikiakiahana mafy; betsaka ny malemy sy ny mandringa no sitrana koa; 8ka hafaliana moa izany no tao amin'izany tanàna izany!
9Ary nisy lehilahy anankiray atao hoe Simona, izay efa tao an-tanàna rahateo: mpamoha angatra nahatalanjona ny vahoakan'i Samaria izy io, ka nanao ny tenany ho zavatra. 10Nanaraka azy avokoa ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe, fa ity lehilahy ity no Herin'Andriamanitra izay atao hoe, Hery lehibe, hoy izy ireo. 11Efa voarebirebin'ny zava-mahatalanjona nataony hatry ny ela izy ireo, ka izany no nanarahany azy. 12Fa rahefa nino an'i Filipo izay nitory ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesoa-Kristy izy ireo, dia natao batemy avokoa na lahy na vavy. 13Na ny tenan'i Simona aza dia mba nino; ary rahefa natao batemy izy dia tsy nahasaraka an'i Filipo, sady talanjona erý nahita ny famantarana amam-pahagagana lehibe tanteraka teo anatrehany.
14Rahefa ren'ny Apostoly tany Jerosalema fa nandray ny tenin'Andriamanitra ny tany Samaria, dia nirahiny hankany Piera sy Joany. 15Nony tonga tany izy roa lahy, dia nivavaka ho an'ny olona mba handraisany ny Fanahy Masina; 16satria vita batemy tamin'ny anaran'i Jesoa Tompo ihany izy ireo, fa tsy mbola nisy nidinan'ny Fanahy Masina na dia iray aza. 17Dia nametrahany tànana izy ireo, ka nandray ny Fanahy Masina. 18Nony hitan'i Simona fa fametrahan'ny Apostoly tànana no nanomezana ny Fanahy Masina, dia nanolotra vola azy izy 19nanao hoe: Mba omeo ahy koa izany fahefana izany mba handray ny Fanahy Masina izay rehetra hametrahako tànana. Fa hoy Piera taminy: 20Aoka ho very miaraka amin'ny tenanao ny volanao, satria nataonao fa azo vidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. 21Tsy manana anjara amin'ity raharaha ity hianao na dia kely aza, satria tsy mahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra. 22Koa mibebaha amin'izao haratsianao izao, ary mangataha amin'ny Tompo mba hamela izany hevitry ny fonao izany raha azo atao, 23satria hitako fa mbola anatin'ny fialonana mangidy sy voafatotry ny ota mihitsy hianao. 24Dia namaly Simona ka nanao hoe: Mivavaha ho ahy amin'ny Tompo hianareo, mba tsy hanjò ahy izay voalazareo. 25Nony efa nanambara sy nitory ny tenin'ny Tompo izy roa lahy, dia niverina tany Jerosalema, ka nitory ny Evanjely tamin'ny vohitra maro eran'i Samaria.
26Ary nisy anjelin'ny Tompo niteny tamin'i Filipo ka nanao hoe: Mitsangàna, ka mandehana mianatsimo any amin'ny làlana midina avy any Jerosalema mankany Gazà, izay tanàna foana. 27Dia nitsangana izy ka nandeha. Ary indro nisy lehilahy anankiray avy any Etiopia, olom-bositra sy manamboninahitra lehibe tao amin'i Kandasy mpanjakavavin'i Etiopia, sady mpitandrina ny fananany rehetra, tonga tao Jerosalema mba hivavaka. 28Nony niverina izy, ka nipetraka teo ambonin'ny kalesiny, dia namaky ny bokin'Izaia mpaminany. 29Ary hoy ny Fanahy tamin'i Filipo: Mandehana manatona io kalesy io. 30Dia nihazakazaka Filipo ka nandre ilay olona namaky ny bokin'Izaia mpaminany, ary nanao taminy hoe: Moa fantatrao tsara va izay vakianao? 31Ka hoy izy: Hataoko ahoana no fahalala izany raha tsy misy olona mitari-dàlana ahy? Dia nangataka an'i Filipo hiakatra ho eo aminy izy.
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0792 seconds